Inona No Mitranga Amin’ny Politika Afrikana Tatsimo? Araho Fotsiny Ny Tenifototra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Mey 2016 4:31 GMT
Mpianatra, ray aman-dreny, mpanao politika, ary olo-malaza no nampiasa ny tenifototra #FeesMustFall mba haneho ny hatezerany sy ny tsy fankasitrahany ny fampiakàrana. Iray amin'ireo tenifototra tsara indrindra amin'ny vaovao ao Afrika Atsimo izany ho an'ny 2015.
Taorian'ny fihetsiketsehana #FeesMustFall nanerana ny firenena izay nampikatso ny oniversite tao Afrika Atsimo, nanambara ny governemanta Afrikana Tatsimo fa tsy hisy fisondrotana ny saram-pianarana. Nankalaza ny fandreseny miaraka amin'ilay tenifototra #FeesHaveFallen ny mpianatra sy ny mpanohana azy.
Ivelan'ny #FeesMustFall, nampiasa ny tenifototra #NationalShutdown ny mpianatra nanohitra ny fampisondrotana ny saram-pianarana. Nampiasaina ilay tenifototra mba hangatahana ny fanakatonana vonjimaika ny oniversite ao amin'ny firenena. Tonga faha valo teo amin'ny lisitry ny fironana maneran-tany ilay tenifototra tamin’izay fotoana izay.
Nitranga ny tenifototra #ZumaMustFall taorian'ny fanesorana ny Minisitry ny Vola -n'ny Filoha Jacob Zuma, Nhlanhla Nene. Nosoloany an'i David Van Rooyen i Nene, nefa ny tsindry nataon'ny vahoaka tanaty sy ivelan'ny tranonkalam-pifandraisana no nanery azy hanolo an'i Rooyen an'ny Minisitry ny Vola amin'izao fotoana izao Pravin Gordhan.
Tamin'ny taona lasa, ny tatitra nataon'ny Mpiaro ny Olom-pirenena ao Afrika Atsimo, Thuli Madonsela, dia nahita fa nisitraka tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny fanatsaràna ny fiarovana ny fonenany any Nkandla ny Filoha Jacob Zuma, izay mitentina 250 tapitrisa Rands na 25 tapitrisa US$ amin'ny mpandoa hetra. Nangataka an'i Zuma taty aoriana ny Mpiaro ny Olom-pirenena mba hamerina amin'ny fanjakana ny ampahany amin'ilay vola. Nandidy ny filoha sy ny tahirimbolam-pajakana izy hiara-miasa mba ahitàna ny tena tetibidy.
#PayBackTheMoney sy #WeWantTheMoney no tenifototra manan-danja nampiasain'ny olona nametraka tsindry tamin'ny Filoha Zuma mba hamerenany ny vola. Tamin'ny Febroary 2016, nilaza ny Filoha Zuma fa ho averiny ny vola fa mbola niandry “ny dingana parlemantera izy mba hahafahany manapaka hevitra ny amin'ny fomba hatao.”
Hetsi-panoherana nanomboka ny 9 Marsa 2015 ny Rhodes Must Fall, izay ny fahazoana ny fanesorana ny sarivongan'i Cecil Rhodes any amin'ny Oniversiten'i Cape Town no tanjona. Noho ny #RhodesMustFall, nesorina ny 9 Aprily 2015 ilay sarivongana.
Britanika mpandraharaha sy mpanao politika tany Afrika Atsimo i Cecil John Rhodes. Mpanohana mafana fo ny imperialisma Britanika, ny orinasany British South Africa Company dia niorina tao amin'ny faritr'i Afrika Atsimo tao Rhodesia (Zimbaboe sy Zambia ankehitriny), ka nitondra ny anarany ilay orinasa tamin'ny 1895.
Amin'ny alalan'ny tenifototra #AfrikaansMustFall, mitranga any Afrika Atsimo ny adihevitra momba ny fampiasana ny fiteny Afrikaans ho toy ny fitaovam-pampianarana any amin'ny oniversite.
Tato anatin'ny herinandro vitsy, nipoaka ny fihetsiketsehana momba izany, indrindra tao amin'ny Oniversiten'i Pretoria. Milaza ny mpanao fihetsiketsehana fa manilikilika ny mpianatra izay tsy miteny izany ny fampiasana ny Afrikaans. Ny Afrikaans, fiteny “West Germanic” izay ampiasaina indrindra any Afrika Atsimo sy any Namibia, dia fiteny lehibe indrindra fahatelo any Afrika Atsimo, aorian'ny Zulu sy ny Xhosa. Misy fiteny ofisialy 11 any Afrika Atsimo.
Voampanga ho namela ny ao amin'ny fianakavian'ilay teratany Indiana mpanankarena Gupta handray fanapahankevitra amin'ny raharaham-panjakana ny Filoha Jacob Zuma, anisan'izany ny fanomezana toerana minisitra ho an'ny olona sasany. #GuptaGate no iray amin'ireo tantara ratsy lehibe indrindra tamin'ny fiadidian'i Zuma.
Araka ny News24, nanomboka tamin'ny Aprily 2013 ny Guptagate, rehefa niantsona tao amin'ny seranam-piaramanidina miaramila, Tobim-pamaharan'ny Tafika an-Habakabaka Waterkloof, ny fiaramanidina ara-barotra iray nitondra mpitsidika ho any amin'ny fianakaviana Gupta, fanitsakitsahana ny fiarovam-pirenena.
Tamin'ity volana ity , nanambara ny lefitry ny Minisitry ny Vola any Afrika Atsimo, Mcebisi Jonas, fa nanome azy ny toeran'ny Minisitry ny Vola ny fianakaviana Gupta, saingy nolaviny izany.
Nanamafy ihany koa ny Mpikambana teo aloha tao amin'ny Parlemanta avy amin'ny African National Congress, Vytjie Mentor, fa nanome azy toerana minisitra ilay fianakaviana, saingy nolaviny.